Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto NY
Ireo asa dia matetika tsy azo tsoahina, izay misy sarin'olona tsy hita isa ary mampita fahasarotana maro ho an'ireo izay tafiditra ao. Raha ny marina dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany. Matetika izahay no mamoaka fangatahana hamita bebe kokoa amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy amin'ny haingana kokoa noho izahay. Amin'izao fotoana izao dia mamokatra eo amin'ny ezaka ataontsika isika na dia eo aza ireo fitokisana ireo.
Ny singa manan-danja maro dia manampy amin'ny fahombiazan'ny tetikasa, saingy ny telo amin'ireo tena ilaina dia maneho ny porofo sy ny fanadihadiana manara-maso, ny fifandraisana amin'ny fifandraisana, ary ny fanavahana ny zavatra ilaina, ny fanaraha-maso ny fanirian'ny namana sy ny faharetan'ny asa.
Fanamafisana ny fepetra takina, ny andrasan'ny mpandray anjara sy ny asa fiasa
Ny mpiara-miasa dia mety hisy fiantraikany na ho voatarika eo amin'ny fiaraha-monina - amin'ny alalan'ny safidy fidiram-bola, fihetsiketsehana na valiny-na mety ho hita taratra amin'ny tenan'izy ireo fa misy fiantraikany. Ny vokatra na ny vokatra azo dia mety ho tsara na ratsy eo amin'ny natiora.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia manana mpiara-miasa maro. Ny fanekena ny mpiara-miombon'antoka rehetra dia manangana ny fitifirana ny fahombiazan'ny firoboroboana. Tokony hiantoka sy handefa antontan-kevitra manan-danja momba ny tombontsoany, ny fifankatiavana, ny fiantraikany, ny fampidirana mety, ary ny fiantraikany eo amin'ny famaritana, ny famonoana sy ny vokatra farany. Raha te hahazo io tahirin-kevitra io, dia manoritsoritra ireo mpiara-miasa araka ny toetrany. Izany dia tsy mitaky be loatra amin'ny fananganana rafitra hiatrehana ny mpiara-miasa tsirairay. Ny fitomboan'ny fifantohana amin'ny fifandraisana amin'ny ankapobeny dia fototra iray amin'ny fanandramana ny fahombiazana.
Ahoana no hanarahanao ny faniriana? Amin'ny alalan'ny fifandraisana. Tena manakiana mafy tokoa fa misy fifandraisana maranitra be dia be voafaritra amin'ny fikarakarana ny fiaraha-miasa sy ny mpiara-miasa.
Ny ampahany manan-danja indrindra dia ny mianatra amin'ny adiresy. Ny Project Management Institute (PMI®) dia maneho fa ny 90 isan-jaton'ny tale mpandraharaha iray dia fifandraisana, na izany dia mety tsy voafetra ho an'ny resaka vao haingana. Ny fifandraisana ara-dalàna dia ahitana fifandimbiasana, tatitra manjavozavo, mamorona tatitra, fandraketam-peo manomboka amin'ny famoriam-bahoaka iray eo amin'ny manaraka, sy ny sisa. Mba hanaovana izany araka ny tokony ho izy, dia mitaky ny fitantanan-draharaha rehetra mifandraika amin'ny serasera. Ny famokarana fandaharana tahaka izao dia azo apetraka ho fanontaniana enina izay tokony hangatahana tsy an-kijanona: Iza, inona, Oviana, aiza, ahoana ary nahoana?
Iza no tokony omena?
Inona no tokony homena?
Amin'ny firy no tokony hitrangan'izany?
Aiza no tokony hitrangan'izany?
Nahoana no tsy maintsy hitranga izany?
Alohan'ny hanombohana ny fisainanao dia tadidio fa efa nanazava ny tanjona, ny toerana sy ny fepetra rehetra ianao. Ny famakiana mazava ny zavatra takiana sy farany amin'ny fividianana vola avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka dia maika. Ireo zavatra ilaina ireo, miaraka amin'ireo tanjona mifandraika amin'izany, ny tanjona sy ny vokatra azo, dia mamela ny asa izay tsy maintsy tanterahina ary hodiovina amin'ny fiainan'ny firoboroboanao. Aoka ho toy izany, raha mbola tsy azonao tsara ny zavatra azonao tanterahina, dia tsy tokony hanomboka amin'ny fisainanao ianao.
Ho sahirana izany, raha tsy hay fehezina, mba handroso amin'ny fomba fijerin'ny mpiara-miasa raha toa ka misy ny tsy fisian'ny mazava momba ny fahaiza-manavaka sy ny faniriana. Izany no mahatonga ny mpiara-miasa tsy maintsy miavaka ary ny fanirian'izy ireo dia miseho ara-potoana amin'ny fiainana andavanandro izay mety ho tratran'ny toe-javatra.
Ny fitazonana ireo loha-hevitra telo manan-danja-porofo manamarina sy manadihady ireo mpiara-miasa, ny famoronana sy ny fampiasana ny fifandraisana mifandray amin'ny fifandraisana, ary ny fanavahana ara-drariny ny fepetra takian'ny rafitra, ny fanirian'ny mpiara-belona ary ny fahasimbana mazava tsara ny habetsaky ny asa: ary manatsara ny fahafaha-manao fandrosoana.
Daty nahaterahana Daty: Ny antony tokony hikarakarana sy ny tokony hatao